Fetiben'ny Otawa 2022 Fizarana 2 Fotoana hiatrehana ny kolontsaina japoney nentim-paharazana | Fikambanan'ny fampiroboroboana ara-kolontsaina ao amin'ny paroasy Ota
Fampahalalana momba ny fandraisana mpiasa>
Lahateny / atrikasa>
Fampifandraisana Japoney - tranobe fianarana fomba japoney <Hakan-kanto nentim-paharazana>
Tamin'ny taon-dasa dia nanao atrikasa "zavamaneno japoney" sy "dihy japoney" izahay, izay nahazo fangatahana marobe! !!
Tamin'ity indray mitoraka ity, nanokatra sehatra fandraisana anjaran'ny mpivady ny ray aman-dreny sy ny zanaka izay ahafahan'ny fianakaviana miaina miaraka ny kolontsaina Japoney.Rehefa avy nanao fanazaran-tena in-6, maninona raha miara-mitendry zavamaneno eny an-tsehatra sy mandihy dihy japoney!
Fampianarana zavamaneno Japoney
- Mianara zavamaneno nentim-paharazana japoney! ~
Ny vanim-potoana Edo dia voalaza fa vanim-potoana nielezan'ny kolontsaina tamin'ny sarambabem-bahoaka.
Lesona isan-karazany no entina am-pahavitrihana, ary eo amin'izy ireo dia tena nalaza ny zavamaneno japoney.
"Koto", izay noheverina ho iray amin'ireo fahafinaretana ho an'ny fianakaviana malaza, "Shamisen", izay be mpitia teo amin'ny sarambabem-bahoaka, ary "Kotsuzumi", izay nampiasaina tamin'ny dingana Noh sy Kabuki.
Aorian’ny fanazaran-tena in-6 (1 ora sy sasany) no hampahafantarana ny vokatra ao amin’ny Efitrano Kelin’ny Ota Ward Plaza ny alahady 12 desambra.
Tsindrio eto raha hijery antsipiriany sy fampiharana
Mazava ho azy fa dihy dihy Japoney
-Mitondra yukata (kimono) sy mandihy-
Ny dihy japoney dia manana tantara sy tantara niainga avy amin'ny dihy Kabuki.
Dihy maro loko sy manintona izay maneho ny rivotra, ny hazo ary ny vorona, ary mandihy lehilahy sy vehivavy amin'ny sokajin-taona rehetra.
Amin'ity indray mitoraka ity dia hianaranao ny fototry ny dihy Japoney, manomboka amin'ny fitafiana ka hatramin'ny fitondran-tena.
Mampifandray trano fianarana Japoney-Mafana sy Japoney <Hana / Tea / Calligraphy>
Ny volana oktobra no hivoaka ny vaovao.